I-Google Earth - Ikhasi 2 - Geofumadas
GPS kunye Google Earth in Cooperation
4 iminyaka emva kokuphonononga gvSIG neNtsebenziswano, Sinovuyo ukusasaza impapasho entsha ye Arnalichm thina umbutho iingcali wadala ukwandisa ifuthe abadlali yoluntu ngenkxaso yobugcisa, babhunga kunye noqeqesho kweli candelo amanzi okusela yaye yobume bendalo. Sibhekisela kwi ...
uluhlu Rhweba ngaphandle kwe Google Earth zilungelelanise eendawo kwi-Excel, Umfanekiso ne Rich Text
Lo mzekelo nje nge-Excel ungathumela umxholo kwiGoogle Earth. Icala yile: Sinoluhlu lwee-coordinates kwifomati yesimo se-decimal (lat / lon). Sifuna ukuthumela kwiGoogle Earth, kwaye sifuna ukubonisa ikhowudi yenkalo yomdla, isicatshulwa ngesibindi, umbhalo ochazayo, umfanekiso we ...
Ndikhuphela inguqulo ye-beta ye-Google Earth i-6.2.1.6014 kwaye ndakuxhasa oko umsebenzisi anditshilole khona, kukho ezinye izinto eziphuculayo. Nangona kukho ezinye izinto, ngeenjongo zethu ezi ndaba ze-4 zibonakala zincedo kum; nangona ezinye zezi zinto zaziboniswa kwi-6.2 version, kubonakala ngathi ngoku ba ...
Makhe sibone ityala: Ndiye kwintsimi yokwakha ipropati, njengoko kuboniswe kwitheyibhile elandelayo kwaye ndifuna ukuyijonga ngeso sihloko kwiGoogle Earth, kubandakanywa neefoto ezimbalwa endithathayo I-intenethi yethemplate yinto enye: Iguqula I-UTM Geographical idibanisa kwifomati yedesimali, njengoko i ...
I-Plex.Earth yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth Ngaba akukho mthethweni?
Sivele sibone ezinye iinkqubo ezikhutshwe imifanekiso evela kwiGoogle Earth. I-Georeferenced okanye ayikho, ezinye azikho njengeStchMaps kunye ne-GoogleMaps Downloader. Ngenye imini umhlobo wandibuza ukuba yiyiphi i-Plex.Earth eyenzeka kwi-AutoCAD iphula imigomo yeGoogle. Yiyiphi imigomo yeGoogle http://earth.google.com/intl/en/license.html (c) ...
Izifundo ze-GIS kwi-Intanethi, ngesiSpanish, ezinye zikhululekile
Uqeqesho lweGeospatial yinkampani ezinikezele ukuqeqeshwa kwizihloko ezicwangcisiweyo ezisetyenziswe kwiiNdawo zoLwazi lweeNdawo. Kungekudala sele iqalile ukufikelela kumgangatho othetha isiSpanish, kunye nezifundo ezifanayo kunye nabafundisi ababhekiselele kwimimandla. Phakathi kweenzuzo zoQeqesho lweGeospatial, ngaphandle kweendlela izifundo zaseSpeyin ziyakwamkelwa ngoku, zizo: ...
Kwiintsuku ezintathu kuphela ngaphambi kokuba i2011 igqityiwe, ndagunyazisiweyo ukuthetha ubuncinane ezi zintle zintathu eziza kutshintsha ubomi bethu kwi-2012: 1. UMicrosoft uthenga amaBentley Systems. Njengoko unako ukuva, iMicrosoft ifinyelele isivumelwane sokugqibela sokufumana ingundoqo ye-Bentley Systems eyenziwa kwi-Bentley Infrastructure 500; inani ...
Ngethuba elidlulileyo ndathetha ngePlex.Earth Tools ze-AutoCAD, ithuluzi elithakazelisayo ngaphandle kokungenisa, ukudala i-mosaics, imifanekiso eyi-georeferenced kunye nokuchonga ngokuchanekileyo, unokwenza iinkqubo ezininzi eziqhelekileyo kwindawo yezolimo. Ngeli xesha ndifuna ukubonisa isizukulwana semigca ye-contour ukusuka kwiGoogle Earth. Mhlawumbi i nyaniso ...
Ukusetyenziswa okusebenzayo kweemifanekiso zembali zeGoogle zomhlaba
Kwakungenye yeenguqu ezintle ezenziwa yiGoogle Earth kwinguqulo ye-5, leyo ngexesha lokusivumela ukuba sibone imifanekiso yonyaka eyapapashwa yenza kube lula ngathi ukuba sisebenzise lowo unesisombululo esiphezulu okanye ukufaneleka kweenjongo zethu. Kwiimeko ezininzi, kuba umfanekiso osandul 'utsha ufihla ukufihla into yethu ...
Ekugqibeleni ndibona isicelo esihle kakhulu se-iPad esenzelwe ukufaka idatha ye-GIS kwintsimi. Isixhobo sinakho izinto ezininzi, kwaye ushiya ama-diapers izicelo endizame njengeGaiaGPS, i-GIS4Mobile, i-ArcGIS ye-iPad kunye ne-GISRoam; lo mbuso onokugqibela kodwa ongenamthandi wokusebenza kunye nokugxila ngakumbi kuhlalutyo ...
Mhlawumbi yenye yezona zinto zixabisekileyo kwiimveliso zentetho yeSpanishi phantsi kwesihloko se-geospatial. Ukungabi nalolu xwebhu kumthetho luphulo-mthetho; Masingathethi ukungayihoyi iprojekthi ngaphambi kokuba uyifunde kule nqaku yeGeofumadas. Kubonakala ukuba imveliso enjenge ...
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 15 kwiphepha elilandelayo